by UMike Shelby
Ndiye ndaqulunqa iziphakamiso zam ezizodwa kwiingxoxo zesiNgesi nesigama. Zisekelwe kumava kunye nolwazi lwam, kwaye iingcebiso kunye neengcebiso zingabaluleka kubo bonke abafundi besiNgesi. Ndiyathemba ukuba baya kuba yincwadana emfutshane kodwa efunekayo yabafundi abaninzi beNgesi. Ndiyifunde ngokugqibeleleyo kwimiba yeendlela ezifanelekileyo kunye nezixhobo zokufunda isiNgesi. Ezi zixhobo ziquka ii-audios, iividiyo, iiwebhusayithi, iincwadi zokufunda, njl.
Ndifuna ukwabelana nawe ngolwazi ngolwimi lwesiNgesi. Ngokuqinisekileyo, ukuthetha imihla ngemihla kwisiNgesi ukuya kwiintetho zesiNgesi kwiindawo ezahlukeneyo kunceda kakhulu ukuba ukwazi ukuthetha isiNgesi kakuhle. Kodwa bambalwa abafundi baseNgesi banethuba elide elide. Ukuze ekugqibeleni bakwazi ukuthetha isiNgesi ngokufanelekileyo, kuqala kwabo bonke abafundi baseNgesi kufuneka babe nezinto ezibalulekileyo kunye nomxholo obalulekileyo kwizihloko zonke zemihla ngemihla (audios, iividiyo, iimibhalo eziprintiweyo / iincwadi zokufunda, njl. Izinto ezifunekayo mazibandakanye intetho, iingqungquthela (iimathekisthi ezithethiweyo), imibuzo-iimpendulo kunye nomxholo obalulekileyo, uluhlu lweengqungquthela zentsingiselo yegama elinzima kunye nezivakalisi (izibhengezo) kunye nezivakalisi zokusetyenziswa kunye nesigama esibanzi kuzo zonke izihloko zemihla ngemihla .
Izindlela zeNgxoxo zeNgesi
Abafundi besiNgesi mabaphulaphule isivakalisi ngasinye kwiingxoxo (iingxoxo zeengxoxo) kwiimpahla zomsindo amaxesha amaninzi kwaye ubone imifanekiso yabo ngexesha elifanayo, kwaye uqonde yonke into kwezi zivakalisi ngokucacileyo.
Kubalulekile ukuba abafundi besiNgesi bafunde (ukuvakalisa) isivakalisi ngasinye ngokuvakalayo uze uqhathanise ukubiza kwabo kumbhali womlobi.
Ukuthetha umsebenzi ngokuzithiba. Kubalulekile ukuba abafundi bahlole ukuba ngaba bangayithumela ngomlomo umxholo wale ntetho ngokubambisana kwiingxoxo zokuqala njengoko kunokwenzeka. Oko kuthetha ukuba kufuneka bazame ukuba ngumdlali kwiintetho kwiintetho zombini. Into ebalulekileyo kubo ukuthetha isiNgesi, kwaye ukhangele kwingxelo yeengxoxo (iingxoxo) nokuba zenze naziphi na iimpazamo xa zithetha.
Abafundi banokwenza nemibuzo yabo ebhaliweyo kwiingxoxo ezifuna iimpendulo ezinde ziqulethwe kwiingxoxo ukuze ziququzelele (yenza kube lula) ukuxelisa ingxoxo. Ngaphandle koko, abafundi banokubhala amagama abalulekileyo kunye nemibonakalo, okanye iingcamango eziphambili njengecebo lokubenzela lula ukuba zixelise ezo ncoko.
Kubalulekile ukuba abafundi balungiselele imibuzo kunye neempendulo ezinomxholo obalulekileyo kwimida yonke yemihla, kwaye usebenzise ukuthetha. Ukubonisa iindlela ezahlukeneyo zokubonisa ingcamango ethile bangenza imibuzo eninzi kunye nezimpendulo kwinqanaba elinye kulo msebenzi wokuthetha. Kukho iiwebhsayithi ezimbini ezinemibuzo eninzi eyenziwe ngokuNgesiNgesi kwiintlobo ezahlukeneyo zezihloko.
Abafundi besiNgesi kufuneka babe neelulu leentsingiselo zegama kunye neentetho (amazwi) kwisihloko ngasinye kunye nezivakalisi zokusebenzisa. Kumele bafunde ezi zihlandlo eziqhelekileyo zokusetyenziswa kwezivakalisi xa zifuneka. I-Longman Language Activator Dictionary (i-English unique Idea Production Dictionary) ihlanganisa lo mbandela ngokugqibeleleyo. Kubalulekile ukuba abafundi benze izivakalisi zabo kunye nesigama, ngokubhekisele kwiimeko zangempela zobomi.
Abafundi besiNgesi banokufunda isigama esininzi kwisifundo ngasinye kwizichazi-magama zesiNgesi. Iincwadana ezicacileyo zesiNgesi zinikezela ngeenkcazelo ezicacileyo zokusetyenziswa kwamagama kunye nezivakalisi ezimbalwa zokusetyenziswa kwegama ngalinye lithetha, nto ibaluleke kakhulu. Kubalulekile ukuba abafundi besiNgesi benze izivakalisi zabo ngesigama esinzima. Bafanele bacinge ngeemeko zobomi bokwenene apho kwaye isigama esinokusetyenziswa ngayo.
Abafundi banokukwazi ukuqonda isilwanyana esitsha seNgesi ngokufunda izihloko eziphathekayo (okokuqala) kuzo zonke izihloko zemihla ngemihla ebalulekileyo kunye nomxholo obalulekileyo, umzekelo: Iingcebiso eziSebenzayo kunye neengcebiso zokwenza ubomi bemihla ngemihla kwaye buhle (izixazululo ezisebenzayo kwiingxaki zemihla ngemihla). Iincwadi ezinjalo zokunceda ekuzilungiseleleni imiba yemihla ngemihla zifumaneka kwiindawo zokugcina iincwadi. Abafundi mababhale phantsi isigama esingaziwa kwizivakalisi ezipheleleyo. Kubalulekile ukuba baqhelise ukuxelela umxholo weetekisi abazifundileyo. Njengoko abantu bathi, ukwenza oku kwenzayo kugqibelele.
Ukuhlaziywa rhoqo kwezixhobo kukuqinisekisa ulwazi olunempumelelo kunye nempumelelo ekufundeni.
Kubalulekile ukuba abafundi basebenzise nezinye iimvavanyo ezibalulekileyo kwizihloko ezahlukahlukeneyo ukuphucula ingxoxo yabo yesiNgesi kunye nezakhono zesigama: ii-audios, iividiyo ( iividiyo zokufunda zesiNgesi, iividiyo zokuhamba, njl.), Izixhobo ze-intanethi, amaphephancwadi okufunda isiNgesi, amaphephandaba , iincwadi zeendaba, iinkonzo zomsakazo (ngokukodwa iiprogram zokufunda i-English / izixhobo ze-English), iiprogram ze-TV (iiprogram zemfundo, iifrimu zefilimu, iifilimu, iindaba), iincwadi kunye ne-e-ncwadi kwiintlobo ezahlukeneyo, ukuthetha nge-intanethi kunye nezikhulumi zesiNgesi zesiNgesi (ingxoxo, imeyile, Skype). Iilayibrari ezifanelekileyo zinokukhethwa ngokubanzi kwezixhobo zokufunda zesiNgesi.
Ndiyabulela kuMike Shelby ngokunika le ngcebiso malunga nendlela yokufunda ingxoxo yesiNgesi nesigama esekelwe kwiimeko zakhe zokufundisa zesiNgesi .
Umhlobo wam Ophumelelayo
Ukuvakalisa iSpanishi kunye no-J
Funda Oko Ungayithetha NgesiNgesi Xa Unika okanye Ufumana Isipho
Ukubhengezwa kweeNcwadi - eziPheleleyo zeeNcwadi
I-ESL Intonation - Iintlobo zeengxaki
Iimpazamo eziqhelekileyo zokubhaliweyo kweSpeyin Ufanele uziphephe
Iintlobo zeLuthando - Ukuhambelana kweZodiac
Ukufumanisa iJob kubafundi be-ESL
Umkhuhlane weNkcazo kaMshuwalense kunye neNyaniso
Iintlobo zeeNkcazo zeZikolo eziPhakamileyo
Ukubuyisela ubuNjineli (Ukuqhawula) Izicelo ze Delphi
I-LPGA Tour of Victory Over Leaders
Projects Craft Projects
Iimvumi ze-Metal ezinamandla kakhulu ze-1992
Ngaba Kukhuselekile Ukusela I-Bleach?